Iiholide zeMGM zongeza i-Cosmopolitan yaseLas Vegas kwipotfoliyo yayo
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iihotele kunye neeholide » Iiholide zeMGM zongeza i-Cosmopolitan yaseLas Vegas kwipotfoliyo yayo
Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • inkcubeko • ukonwatyiswa • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • Utyalo mali • Iindaba zeLuxury • iindaba • abantu • Resorts • Shopping • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba zase-USA ezaphulayo
Ii-MGM Resorts International ukufumana imisebenzi ye-Cosmopolitan yaseLas Vegas ukuze iqwalasele imali eyi- $ 1.625 yezigidigidi, ngokuxhomekeke kulungelelwaniso lwemali yokusebenza yesiqhelo.
I-MGM Resorts International ibhengeza ukuthengiselana ukufumana ukusebenza kwe-Cosmopolitan yaseLas Vegas
I-MGM Resorts International ingena kwisivumelwano esiqinisekileyo neBlackstone sokufumana ukusebenza kweCosmopolitan yaseLas Vegas.
Ukulandela ukuvalwa kwentengiselwano, iiholide zeMGM ziya kungena kwisivumelwano seminyaka engama-30 sokuqeshisa, kunye neendlela ezintathu zokuvuselela iminyaka eli-10.
I-MGM Resorts International namhlanje ibhengeze ukuba iNkampani ingene kwisivumelwano esiqinisekileyo neBlackstone yokufumana ukusebenza kweCosmopolitan yaseLas Vegas ukuze iqwalasele imali eyi- $ 1.625 yezigidigidi, ngokuxhomekeke kulungelelwaniso lwemali yokusebenza yesiqhelo.
Ixabiso lokuthenga limele amaxesha aphindwe asibhozo ahlengahlengisiweyo e-EBITDA, kubandakanya ulungelelwaniso lokusebenza olulindelweyo kunye namathuba okukhula kwengeniso.
Ukulandela ukuvalwa kwentengiselwano, IiMGM Resorts Iza kungena kwisivumelwano seminyaka engama-30 sokuqeshisa, kunye neendlela ezintathu zokuvuselela iminyaka eli-10, ngentsebenziswano phakathi kweStonepeak Partners, iCherng Family Trust kunye neBlackstone Real Estate Income Trust, Inc. asethi. Iindawo ekuchithelwa kuzo iiholide ze-MGM ziya kuhlawula irenti yonyaka eyi- $ 200 yezigidi, inyuka rhoqo ngonyaka nge-2% kwiminyaka eyi-15 yokuqala kwaye enkulu nge-2% okanye ukunyuswa kwe-CPI (kufakwe kwi-3%) emva koko.
“Siyazingca ngokudibanisa I-Cosmopolitan, indawo yokuphumla kunye nekhasino eLas Vegas Strip, kwipotifoliyo yethu, utshilo IiMGM Resorts CEO kunye noMongameli uBill Hornbuckle. “Uphawu lweCosmopolitan lubonwa kwihlabathi liphela ngenxa yesiseko sabathengi abakhethekileyo kunye nemveliso ekumgangatho ophezulu kunye namava, ukuyenza ilingane neepotifoliyo yethu kunye nokuqhubela phambili umbono wethu wokuba yeyona nkampani yenkulumbuso kwezemidlalo. Sijonge ukwamkela iindwendwe kunye nabasebenzi kusapho lweMGM Resorts. ”
“Ngaphezulu kwe- $ 500 yezigidi zeemali ezityaliweyo ukuphucula ipropathi ukusukela ngo-2014, I-Cosmopolitan inika ithuba elingathethekiyo lokwandisa abathengi kwaye iza kubonelela ngobunzulu bokukhetha kwiindwendwe zethu eLas Vegas, utshilo uMgcinisi MGM Resorts CFO Jonathan Halkyard. "Siyakholelwa ukuba singabusebenzisa ubuchwephesha bee-MGM Resorts, iqonga lokusebenza kunye nezinye izinto ezinokufezekiseka ukuze siqhubeke nokubonelela ngenkonzo ekumgangatho ophezulu, ngelixa siqhuba ukukhula kwepropathi."
Phambi kwesibetho se-COVID-19 kwiinyanga ezili-12 ezilandela ukuphela kukaFebruwari 29, 2020, I-Cosmopolitan yavelisa i-959 yezigidi zeedola zerhafu kunye ne-316 yezigidi ze-EBITDAR ehlengahlengisiweyo. Kwikota yesibini yaphela ngoJuni 30, 2021, ipropathi yavelisa i-234 yezigidi zeedola kwingeniso kunye ne-92 yezigidi ze-EBITDAR ehlengahlengisiweyo.